ဘီကျားငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘီကျားငှက် (Hydrophasianus chirurgus) သည် ကြာဖက်နင်းငှက်မျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ကြာဖက်နင်းဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ပါဏဗေဒအလိုအားဖြင့် ဟိုင်ဒရိုဖာစီအင်နပ် ချီရားဂတ်ဟုခေါ်၍ ကြာဖက်နင်းငှက်များနှင့်အတူ ဂျာကဉာနီဒီးမျိုးရင်း တွင် ပါဝင်သည်။ ကိုယ်ထည်အလျား ၁ဝ လက်မရှိ၍ အမြီးချည်းသက်သက် ၁ဝ လက်မ ရှည်သည်။ ကြာဖက်နင်းငှက်များကဲ့သို့ပင် ခြေတံရှည်ပြီးလျှင် ခြေချောင်းများလည်း ရှည်သည်။
သားပေါက်ချိန်၌ အတောင်သည် ဖြူနေသဖြင့် ထိုငှက်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့နိုင်ပေသည်။ အခြားအချိန်များ ၌ အမွှေးရောင်တစ်မျိုး ပြောင်းလဲသွားသည်။ မျက်စိတစ်ဝိုက်နှင့် လည်တိုင် ရှေ့ဘက်ပိုင်းသည် ဖြူနေပြီးလျှင် ဘေးတွင် အဝါရောင်အစင်းကြောင်း တစ်ခုရှိသည်။ မျက်လုံးဘေးမှ ဝိုက်ဆင်း၍ ရင်အုပ်ဘက်သို့ကန့်လန့်ဖြတ် သွားသော အမည်းရောင် အစင်းကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းသည် ဖြူနေသည်။ ငှက်ကလေးများ၌ လည်တိုင်ဘေးတွင် အဝါရောင် အစင်းကြောင်းများ မရှိချေ။ ရင်အုပ်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်လျက် ရှိသော အစင်းသည်လည်း ဆက်မနေဘဲ အဖြူရောင်နှင့် ပြတ်လျက်ရှိသည်။ ဘီကျားငှက်၌ အတောင်ကွေးသော နေရာထိပ်တွင် သန်မာ၍ ချွန်ထက်သော ဆူးများရှိသည်။ တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် တိုက်ခိုက်ရာ၌ ထိုဆူးများကို အသုံးပြုသည်။ အမသည် အဖိုထက် ကိုယ်ထည်ပိုကြီး၍၊ သားပေါက်ချိန်၌ တစ်သွေးတစ်မွေးလှသည်။
ဘီကျားငှက်များသည် သားပေါက်ချိန် မဟုတ်သောအချိန်တွင် ကောင်ရေ ၅ဝ မှ ၁ဝဝ ထိ စုရုံးနေတတ်သည်။ ဘီကျား၏ အော်သံမှာ တူဝင်-တူဝင်-တူဝင် ဟု နှာသံပါသော ကြောင်အော်သံ၊ သို့မဟုတ် ပြွေသံ ကဲ့သို့နားထောင်၍ ကောင်းသည်။ ထို့ပြင် ဟူး-ဟူး-ဟူး နှင့် သာယာစွာအော်တတ် သေးသည်။
ဘီကျားငှက်သည် ချုံဖုတ်ကင်းသည့် ရေပြင်ကိုပို၍ နှစ်သက်သည်။ ရှောင်ပုန်း၍ မနေတတ်ချေ။ နွေအခါတွင် ကျက်စားသောကန်များ ရေခန်းခြောက်လျှင် အနီးအနားရှိ ရေရှိရာအရပ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့တတ်သည်။ ယင်းတို့သည် မလှုပ်မယှက် ငြိမ်သက်စွာ နေသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်ကိုင်းသစ်ရွက်များနှင့် ရုတ်တရက် ခွဲခြားမရနိုင်အောင် ရှိသည်။ ယင်းတို့၏ အစာသည် အသီးအနှံ၊ ပိုးမွှားနှင့် ခရု၊ ကဏန်းတို့ဖြစ်သည်။
မိုးတွင်းအခါ၌ ဘီကျားငှက်ကလေးများ ဥမှပေါက်ကြသည်။ ကြာဖန်နင်းငှက်များကဲ့သို့ပင် အသိုက်များကို သစ်ရွက်၊ ပေါင်းပင်များနှင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ အသိုက်များကိုကျွန်းကလေးများပေါ်၌ လည်းကောင်း၊ မြက်တောထဲ၌ လည်းကောင်း၊ ရေထဲ၌ မျော၍လည်းကောင်း တွေ့ကြရသည်။ အသိုက်များသည် သေးငယ်၍ ဥများမှ ရေထဲတွင် တစ်ဝက်မြုပ်နေတတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ၄ ဥခန့်ရှိ၍ သစ်သော့သီးနှင့် တူသည်။
ဥခွံသည်မာ၍ ချောမွတ်သည်။ အရောင်မှာ ကြေးညိုရောင် တောက်တောက်ဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သော ဥများတွင် အစက် အပြောက်များ မရှိချေ။ ဥအရောင်သည် ပြယ်လွယ်၍ ကြာ သော် ဖြူယော်ယော် ဖြစ်လာသည်။ တစ်ဥလျှင် ပျမ်းမျှ အလျား ၁.၄၆ လက်မနှင့် ပြက် ၁.၁၂ လက်မရှိသည်။ ဘီကျားငှက်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသည်။ 
Landing (in non-breeding plumage) on Floating vegetation at Purbasthali in Bardhaman District of West Bengal, India.
Resting (in non-breeding plumage) on Floating vegetation at Purbasthali in Bardhaman District of West Bengal, India.
Chicks in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
Breeding- with chicks in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
Breeding- shaking off after bath in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
Breeding- preening after bath in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
Breeding- in Hyderabad, India.
Breeding- in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
Breeding- bathing in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
Breeding- after bath in an Indian Lotus Nelumbo nucifera Pond in Hyderabad, India.
↑ BirdLife International (2012). "Hydrophasianus chirurgus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
↑ Viscount Walden, Arthur (1877). "A list of the bird known to inhabit the Philippine Archipelago". Transactions of the Zoological Society of London9(2): 125–252. doi:10.1111/j.1096-3642.1875.tb00238.x.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီကျားငှက်&oldid=711607" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။